Okulungileyo, oMkhulu, kunye nowoyikisayo ngobuGcisa boBugcisa | Martech Zone
NgoLwesine, Meyi 11, 2017 NgoLwesine, Meyi 11, 2017 Douglas Karr
Xa ndakhutshwa ngembeko kuMkhosi wamanzi kwi-1992, yayilixesha elifanelekileyo. Ndayokusebenzela iVirginian-Pilot eNorfolk, eVirginia - inkampani eyamkele ngokupheleleyo i-IT Innovation njengenxalenye yezicwangciso zayo eziphambili. Sifakele ifayibha saza sasisusa isathelayithi esine-line-site, sine-hard-wired programmable-logic controllers kwii-PCs saza safaka idatha esincedileyo ukuba silungelelanise ulondolozo lwethu nge-Intranet, kwaye inkampani yabazali, uLandmark Unxibelelwano, ibisele ityale imali kakhulu ukufumana amaphephandaba kwi-intanethi. Ndiyazi ukuba iWebhu yinto eguqula ubomi kum.
Kwaye nje kwiminyaka emibini ngaphambili, Mnumzana Tim Berners-Lee wakhe zonke izixhobo eziyimfuneko kwiWebhu esebenzayo, kubandakanya IProtokhol yokuGqithisela umbhalo okhawulezileyo (HTTP), Ulwimi lweMibhalo yoPhawulo (HTML), Isikhangeli seWebhu sokuqala, esokuqala Isoftware yeHTTP, iseva yokuqala yewebhu, kunye iphepha lokuqala leWebhu Echaza iprojekthi ngokwayo. Ishishini lam kunye nobomi bam ngokoqobo konke kwaqala ngenxa yendlela yakhe entsha, kwaye bendihlala ndifuna ukumbona ethetha buqu.
Iminyaka engama-25 kamva kunye noTshintsho lweIT
UMark Schaefer wandimema ukuba ndiye naye Izikhanyiso-Ukuthetha kwiiNgqondo eziBalaseleyo kwiTekhnoloji, iDell podcast enika ukuqonda okukhulu kwiinkokeli ezisemva kweyona nkampani zinobuchule kwihlabathi. Ngelixa bendisazi uDell njengenkampani ethengisa iidesktops kunye neelaptops kubathengi kunye neeseva kumashishini-andikaze ndibenolwazi lwendalo iyonke yeDell Technologies de kube eli thuba. Kube luhambo olunomdla- kokubini ukusebenza noMarko endinentlonipho enkulu ngaye- kunye nokufumana ukuqonda ngekamva xa wenza udliwanondlebe nobunkokheli bukaDell.
Njengenxalenye yenkqubo, samenywa ukuba sibekho Dell EMC yeHlabathi eLas Vegas (apho ndibhalela oku kwidesika yam yegumbi lehotele). Sifumene, kungekudala emva koko, ukuba uBerners-Lee uzakuthetha Kukubhadla okungeyonyani. "Giddy" kuphela kwexesha elifanelekileyo lokusetyenziswa ukuchaza ukonwaba kwam. Ndicinga ukuba uMarko undixelele nokuba mandithule ngexesha elinye. Qiniseka ukuba uyaphuma Iingcinga zikaMark kule ntetho ngokunjalo!
Mnumzana Tim Berners-Lee kubuGcisa bobuGcisa
Umgca wentetho esongelwe malunga nesiqingatha sendlela ejikeleze iSands Expo kwaye bendinombulelo ngoMarko ophethe indawo emgceni njengoko bendipakisha ngokukhawuleza izixhobo kwirekhodi yethu yamva nje. Siye sahlala phantsi, uMark wathatha ifoto yam apha ngentla… woohoo! Kwimizuzu embalwa kamva uSir Tim weza eqongeni waqala ingxoxo. Wabelana nothando lwakhe lwakuqala ngo-Isaac Asimov no-Arther C. Clarke, ababhali ababini endathi ndaziswa ngutata wam ongasekhoyo ndisemncinci (kunye no-Star Trek, kunjalo!). Kwiminyaka eyi-16 yam ephezulu, kwakusachulumancisa ukucinga malunga nokufana kobomi bethu-nangona ndiyazi ukuba ngekhe ndikhululwe. Ewe, ngokungathi kuphela umahluko.
UBerners-Lee wazise wonke umntu ukuba wayengeyiyo ingcali ye-AI, kodwa wayenazo ezinye iingcinga malunga nezibonelelo kunye noloyiko phaya. Utshintsho oluza kuvela kwi-AI phantse alunakufikeleleka okwangoku, kodwa akukho namnye ophikisayo okunokwenzeka okanye izibonelelo ezingapheliyo kuluntu.
As I-DellEMC iqhubela phambili iitekhnoloji zayo, umzekelo, ukuhlangana kwe-hyper kunye ne-AI sele ikukude - iinkqubo ezikhulisa ikhompyuter, ukugcinwa kunye nenethiwekhi ngobukrelekrele njengoko iinkampani zifuna njalo. Ukuncitshiswa kokudityaniswa okukhulu, iinkqubo ezingafaniyo, kunye nempazamo yabantu ziya kunceda iinkampani ezininzi ngakumbi ukufikelela Qalisa isantya, isigama esive amaxesha amaninzi kumsitho.
UBerners-Lee uxoxe ngenkqubela phambili yoluntu enokufikelela ekuncedeni ukunciphisa inkunkuma, ukwandisa ukusebenza kakuhle, kunye nokuphuculwa koluntu ngokubanzi kuluntu.
Cinga nje malunga noku ngokwembono yecandelo, uneenkqubo zemali ezinokuqikelela, ukucebisa, okanye nokulungelelanisa ngokusekwe kwimpilo yakho yezemali. Okanye iinkqubo zabasebenzi eziphuhlisa iinkqubo zenkuthazo ezenzelwe ukuba zikhuthaze abasebenzi. Okanye iinkqubo zezolimo ezonyusa ukusetyenziswa kwezibulali zinambuzane okanye amanzi ngamandla ngaphandle kokuba wazise umfama. Okanye iinkampani zetekhnoloji ezinokulinganisa kunye nokwenza ngcono iziseko kunye namava omsebenzisi ngaphandle kwesidingo sokuphuhlisa izicwangciso zemveliso, amaqela ekugxilwe kuwo, okanye kuvavanyo.
Okanye, ewe, ukuthengisa ubukrelekrele bokuzenzela obenza ulwimi lube lolo, ukunikezela, oonozakuzaku, kunye namajelo okwenza ubuwena kunye nokutsala umdla! Wowu!
Kuthekani ngeSkynet kunye nobunye?
The ubuninzi yingqikelelo yokuba ukuveliswa kobukrelekrele obungaphaya kokuqalwa kuya kuthi ngesiquphe kubangele ukukhula kwezobuchwephesha okubalekayo, okukhokelela kutshintsho olungenakuthelekiswa nanto kwimpucuko yabantu.
Ngamanye amagama, kwenzeka ntoni xa iinkqubo ziphuhlisa iinkqubo ezingaphaya kwamandla ethu ukuziqonda? Iintsomi zenzululwazi zihlala zichaza oku njengeTerminator, apho itekhnoloji imisela ubuntu ngokungeyomfuneko kwaye isitshabalalise. Umbono kaBerners-Lee awunabundlobongela kodwa uphakamisa inkxalabo enkulu. Omnye wemicimbi awuthethileyo kukuba iirobhothi azinazo kwaye azisayi kuba nazo amalungelo. Kwaye iinkokheli kwezamashishini nakurhulumente kuya kufuneka zenze ulawulo oluntsonkothileyo ngaphaya Imithetho emithathu ka-Isaac Asimov.
Masibeke ecaleni izixhobo zerobhothi ezikrelekrele esele zaphula umthetho # 1. Ingxaki, njengoko kuchaziwe nguBerners-Lee kukuba iirobhothi ayizizo zinto eziyinyani- kukubhadla okungeyonyani ngu. Iinkampani are Itekhnoloji kwaye bonke bazakwenza i-AI ukunceda kuyo yonke imiba yeshishini labo. UMark uhlala esabelana ngeDomino's Pizza njengomzekelo. Ngaba bayinkampani yepitsa enetekhnoloji? Okanye ngaba zi Itekhnoloji yenzelwe ukuhambisa ipitsa? Kuninzi okugqibela namhlanje.
Kwaye ingxaki? Iinkampani do banamalungelo; ke ngoko, ubuchwepheshe babo baye amalungelo okuzalwa. Kwaye ngummeli, ubukrelekrele bobugcisa obuveliswe yile nkampani buya kuba namalungelo. Yinto eyi-conundrum efuna ukuxoxwa njengobukrelekrele bokufakelwa bokukhawulezisa ukuthandwa kunye nokusetyenziswa. Khawufane ucinge inkampani enkulu, umzekelo, eneqonga elisebenzisa ubukrelekrele bokuzenzela ukwenza into enenzuzo kubanini zabelo - kodwa iyaphazamisa kuluntu. Ayizizo iirobhothi ekufuneka sizikhathaze ngazo, bubukrelekrele bezinto ezingezizo ezokulawula ukuqinisekisa ukhuseleko lwethu.
UBerners-Lee ucinga ukuba ubunyani bunokuba yinto yokwenyani kwisithuba seminyaka engama-50. Watsho ngokungathandabuzekiyo ukuba yeyakhe ngqiqweni uluvo lokuba i-AI iya kudlula ubukrelekrele bomntu. Siphila kumaxesha amangalisayo! Andikholelwa ukuba uBerners-Lee wayothukile kwaye engoyiki ngekamva- uthe nje iinkampani, oorhulumente, kunye nababali beentsomi kufuneka baxoxe ngale micimbi ngakumbi ukuba sinethemba lokuqinisekisa ukuba ikamva lethu likhuselekile.
Ukubhengezwa: UDell uhlawule zonke iindleko zam zokuya kwiDell EMC yeHlabathi kwaye ngumthengi wam Izibane ipodcast. Qiniseka ukuba uyangena kwaye usijonge, siyayifuna impendulo yakho!
tags: aiiberners-leeukuhlanganadelldell emcdell umhlaba we-emcUkudityaniswa kwehyperlas vegasizikhanyisoUMark SchaeferIxesha le-berners-lee